'Waggoota lamaaf hojii malee turuun keenya amma nu aarsa' - BBC News Afaan Oromoo
'Waggoota lamaaf hojii malee turuun keenya amma nu aarsa'
Goodayyaa suuraa Bitaaniyaa Bisiraatii fi Yonaataan Kabbada
Yunivarsitiidhaa barnoota xumuranii hojii barbaacha waggoota lamaaf turuun. Booda keessa garuu hofumaan hojii namoonni kuun baayyinaan hinojjannee jalqabuun galii argachu eegalusaanii, dubbatu dargagoo Bitaaniyaa Bisraat fi Yonaataan Kabbada.
Hiriyyummaan Bitaaniyaa Bisraat fi Yonaataan Kabbada kan eegalee yunivarsiitii Finfinnee muummee gaazexessuummaa fi kominikeeshinii yeroo baratan ture. Erga digirii jalqabaan eebbifamanii booda waan barataniin hojjechuuf fedhii qabu ture.
Haa ta'u malee, akka jedhanitti waggaa lamaaf hojii barbaadanis hin arganne. Erga hojii amma hojatan eegalanii boodas, ''waggoota lamaaf hojii malee turuun keenya caalaa amma nu aarsa,'' jedhu dargaggoonni kunneen.
Egaan isaan booda ture itti yaaduun waa namoonni baayyeen hinyaadne hojjechuun galii mataasaanii argachu akka danda'an gara sammuutti kan dhufeef.
''Hojiin kun biyya keenyatti hin baramne. Innis namootaaf haaluma fedha saanitiin meeshaa binnee ykn feene bakka jiranitti biraa akka geenyuu bilbilaan nutti himu. Nuyis, gatii itti geessine kanfalchiisuun saffisaan hojii keenya raawwanna,'' jedha Bitaaniyaan.
Namni hojiin ko'ooman ykn mana nyaataa dhaqanii soorachuu hin dandeenye nyaata fedhan mana nyaataa barbaadanii geessinaaf jedhu dargaggoon hojii kana hojjataa jiru. Kunis, abbichaaf haalaan yeroo qusataaf jechuun barbaachisummaa hojiisaan kan ibsu Yonaataan.
Dargaggoonni kunneenis tajaajila hojii manaa manatti geessuu kan eegalan konkolaataa xiqqoo daamaas jedhamtuu tokkoo fi doqdoqqee tokkatti fayyadamuuni.
Akka isaan jedhanitti, warreen buddeena hoteelotaaf dhiyeessan waliin walii galtee waan qabaniif hojii isaanii kan guyyaa kanaan eegalu. Kanaan erga hojiisaanii eegalaniin booda naannoo Boolee dhaabachuun hojii biraa eeggatu. Achittis mi'oota adda addaa fe'uun bakka gaafatanitti geessuun galii akka argatan kan dubbatan.
Hojii kana eegaluufi waan itti geessan bitachuuf qarshiin kuma 150 ta'u akka isaan gafate himu.
''Qarshii kana dhaabbilee liqii fi maatiirraa nuu kennameen konkolaataa qarshii 120'n binne. Konkolaatitti qodaa xiqqoo ulfaatuuf doqdoqqee immoo salphaa kan ta'anif fayyadamna,'' jechuun dubbata Yonaataan.
Hojiin irratti bobbaane waan barame miti. Isa beeksisuuf barreefama waraqaa adda addaa bittinsina. Isa kana caalaa garuu maamiltoota keenyaaf tajaajila bareedaa kennuun yeroo isaan nutti gammadan, kaanif waan himanif nuyis hunda isaaniif tajaajila si'ataa kennuuf ni yaalla jedha Bitaaniyaan.
''Gaaffii maamiltoota keenyarraa dhufeen waan manaaf bitamuu qabu galmeessinee suppar maarkeetiidhaa bituun manatti geessina. Kanaanis yeroo namoota hedduu qusachuuf yaada qabna,'' jedhu hiriyyoonni lamaan karoora isaanii dhihoo yeroo dubbatan.
Hojiin isaanii baay'ee akka hin baramne kan dubbatan dargaggooleen kuni fuuladuratti garuu namoonni tajaajila isaanii kajeelan baay'ee akka ta'an abdii qabu.
Viidiyoo Balfa namni gatu gara qarshiitti jijjiiruu
Gondaritti wal-tajjiin jigee yoo xiqqaate namootni 10 du'an
UK'n Gamtaa Awurooppaa keessaa bahuun Afrikaatiif maal fidee dhufu?